Qeybta 1: Apple Music Kulanka
Qeybta 2: Su'aalaha Badanaa La Is Weydiiyo
Apple Music Lugood Kulanka waa adeeg aad kaas oo keydin karta oo dhan adiga music on iCloud oo ay ku jiraan heeso aad keeno ka CD ama ilo kale. Madal Arintan waxay u sahlaysaa in aad si ay u helaan music oo dhan ka qalab kala duwan oo ay dhagaystaan ​​maktabadda buuxa, eegin meesha aad joogto. Haddii aad isku qori adeeggan ee ciyaarta Lugood aad macruufka qalab, Mac ama PC ka dibna aad dhegaysan kartaa saldhigyada ku-baahida radio iyo sidoo kale in aad u aan xayeysiis kasta!
Music Apple adeeg kulan Lugood la heshiiska kartaa qiimo dhan $24.99 oo kaliya halkii sanno. Adeeggu wuxuu taageeraa A.villa 10 aaladaha kala duwan oo ka mid ah aad telefoon, your computer, Apple TV, iPad, iPod taabashada iyo Mac. Adeegga ayaa waxaa la dhisay qumman Lugood on your computer iyo app music xaadirka ah ku qalabka macruufka in aad leedahay. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay in la isticmaalo waa in ay qori. Apple Music Kulanka ayaa sidoo kale xamili karo ama taageeraan qaabab kala duwan oo ka mid ah music iyo qaar ka mid ah waxaa ka mid ah MP3, AAC, AIFF, regelingen, Apple sameecadda ah iyo qaar badan oo.
Soo socda waxaa ku qoran liiska qaar ka mid ah Su'aalaha ugu weyn ee la xiriira adeegga Apple Music Kulanka
1. Waa maxay ciyaarta Lugood?
Lugood Kulanka asal ahaan waa adeeg kaas oo u ogolaanaya in aad ku kaydiso music aad ka dhammaan qalabka aad u iCloud oo dhan iyo tan kaloo ka mid ah kuwa heesaha oo lagu keeno ka CD ama wax kale ilo. Waxa kale oo ay awood u aad u dhegeysato si ay saldhigyada ku-baahida radio aan xayeysiis.
2. Yaa oo dhan waxay xaq u leeyihiin in ay dhagaystaan ​​ama isticmaal Lugood Kulanka?
Qof kasta oo lagu lahaa oo ID Apple ah in Maraykanka iyo wadamada kala duwan ee la xusho oo kale isticmaali kartaa Lugood kulanka. Ka sokow taas, mid ka mid sidoo kale u baahan Lugood 10.5.1 version ama ka dib aad Mac ama PC iyo macruufka 5.0.1 ama ka dib aad iPhone 3GS ama ka dib, iPod taabashada (jiilka 3aad ama ka dib), ama iPad si ay u awoodaan in ay isticmaalaan Lugood Match .
3. Maxay yihiin qaabab kala duwan music in Lugood Kulanka xamili?
Lugood Kulanka xamili kartaa qaabab music gaar ah qaarkood iyo aad u dhigma karo ama geliyaan qaabab music in la ciyaari karo Lugood, oo ay ku jiraan AAC, MP3, regelingen, AIFF, Apple sameecadda ah, iyo in ka badan.
4. Immisa qalabka Lugood Kulanka taageeri karaa?
Waxaa muhiim ah in la ogaado in Lugood Kulanka ma taageeri karaan qalabka aan xad lahayn iyo in ay taageeraan kartaa ilaa 10 oo ay ku jiraan qalabka your computer, iPhone, iPod taabto, iPad, iyo TV Apple.
5. Haddii aan dhagayso on-baahida radio dhex Lugood kulanka, ka dibna waxaan ku yeelan doontaa in ay dhagaystaan ​​xayeysiis ee u dhexeeya sidoo kale?
No, marka aad dhagayso Lugood Kulanka radio on-baahida, markaas aad uma yeelan doonaan in ay dhagaystaan ​​nooc kasta oo xayaysiinta ee u dhexeeya.
6. playlists aan is synced doonaa guud ahaan qalabka ay u gaar ah?
Haa. Marka aad la abuuro, xaalkaa, ama tirtirto playlist ku saabsan Mac, PC, iPhone, iPad ama, isbedel kuwa sidoo kale lagu sameyn doonaa ama synced guud ahaan qalabka wax Lugood Match-karti in aad leedahay. Laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado in playlists la cadaymaha cod, videos, ama PDF files ma hagaagsan doonaa.
7. Miyuu il adeeg Lugood Match ama download songs?
Heeso kasta ama kuwan raadkaygay music in lagu kaydiyaa iCloud on your computer ka heli huleeshay doonaan in ka badan hawada markii uu ciyaaray, inkastoo aad kala soo bixi kartaa ama iyaga loo soo dajiyo waqti kasta adigoo riixaya badhanka iCloud download. Qalabka Your macruufka bilaabi doonaa inuu u ciyaaro gabayadii iyo tareenka ka iCloud sida ay soo bixi oo iyaga ku urursan doonaa si aad u maqli karo iyaga ka dib. Tani xitaa waxaa la samayn karaa, haddii aadan haysan xiriir shabakad. Apple TV oo keliya durdurro heeso.
8. Ma Lugood Kulanka awood u duuban heeso badan oo xidhiidh ah gacanta on my qalab macruufka ah?
Haa. Lugood Kulanka awood u duuban heeso badan oo xidhiidh ah gacanta ku saabsan qalabka macruufka. Si taas loo suurto gal ka dhigi, waxaad u baahan tahay u tag Settings> Lugood & App Store on qalab aad. Daar Isticmaal gacanta Data. Haddii aad halkii ay kala soo bixi lahaa in ka badan Wi-Fi, waxaa dami.
9. Haddii ay dhacdo in aan ku daro wax music cusub si aan maktabadda? Ma u baahan tahay inaad u sheegto Lugood kulanka si ay u dhexaadka ah?
Maya, ma u baahan doontaa inaad u sheegto Lugood kulanka si aad u iskaan sababtoo ah waxa ay si toos ah rescan doonaa content. Laakiin aad ku qasbi karin helid ah by doorashada Store> Cusboonaysii Lugood Match ee Lugood.
10. In kiis Ma resubscribe ka dib markii sannadka u horeeya, ka dibna waxa dhaca? Waxaan waayi doonaa mid ka mid ah heesaha la casriyeeyay on my liiska music?
Maya heesaha oo dhan in aad la casriyeeyay ama lagala soo bixi mar waa mid amaan ah oo aan baabi'i doontaa. Waxa kaliya ee aad lumiso waa dhexe tan iyo markii iCloud kaydinta mar dambe ma awoodi doonaan in ay sii qulquli ama download songs kulan ama uploaded qalabka aad.
11. Waa maxay habka ay u noqon Lugood Kulanka on?
Geedi socodka waa mid aad u fudud. On Mac ama PC, oo dhan ee aad u baahan tahay inaad samayso waa furan Lugood iyo dooran Store> shid Lugood kulanka, ka dibna riix Subscribe. Dhinaca kale, ku saabsan qalabka macruufka, u tag Settings> Music> Subscribe to Lugood kulanka. Markaas Waxaad gali kartaa maktabadda music aad ka your computer. Marka aad samaysay uploading, waxa aad heli kartaa maktabadda music aad ka qalabka macruufka aad by u socda Settings> Music> Daar Lugood kulanka. Haddii aad rabtid in aad shid Lugood Kulanka on Apple TV, u tag Music> iCloud Library.
12. Miyuu Apple ID ayaan aan la dhigan isticmaalka u Lugood kulanka waa in ay xisaabta iCloud ah?
Maya Haddii aad tahay qof la isticmaalayo ah ID gaar ah Apple u iibsadaan, in ID Apple sidoo kale ka shaqeyn doona Lugood kulanka. Waa in aad isticmaasho ID Apple ah taasi oo ku xiran inta badan iibsadaan music aad.
13. Haddii aan wax su'aal ah oo dheeraad ah, de haddaba sidee baan u heli baa u jawaabay?
Haddii aad qabto wax su'aalo dheeraad ah, waxaad soo booqan kartaa bogga taageero Lugood Kulanka inaad wax badan ka bartaan.
> Resource > Music > Talooyin ku Apple Music Kulanka